eBeijing, ikomkhulu laseChina, lelona komkhulu sesona sixeko kwihlabathi.
IKomkhulu elisisixeko (okanye idolophu elikomkhulu okanye singathi nje ikomkhulu) sisixekokazi okanye yidolophu, ebekwe ngokomthetho okanye ngokomgaqo siseko, oko kusenziwa ngurhulumente wesizwe, okanye yindawo ethile yesizwe, njengaseburhulumenteni, kwiphondo okanye kwisizwe. Idla ngokusebenza njengendawo apho kubanjwa khona iindibano zaseburhulumenteni nalapho zikhoyo ii-ofisi zaseburhulumenteni. Uninzi lweenkokheli kunye nabasebenzi baseburhulumenteni basebenza kwikomkhulu ledolophu.
Iidolophu ezilikomkhulu zidla ngokuba yinxalenye yezona dolophu zinkulu kwiingingqi. Umzekelo, iMontevideo likomkhulu laseUruguay kwaye ikwayeyona dolophu inkulu. Ukuba idolophu elikomkhulu inkulu ingaphezulu kunedolophu yesibini kweso sizwe, njengeBangkok eThailand, ingathathwa njengedolophu eyinkokheli.
Nangona kunjalo, ikomkhulu alisayikusoloko liyidolophu enkulu esizweni. Umzekelo, ikomkhulu laseIndiya yiNew Delhi, idolophu encinane kuneMumbai, eyona dolophu enkulu; nelikomkhulu lePakistan yiIslamabad, nekuyidolophu encinane kuneKarachi. Kananjalo, kumazwe ahlulwaluhlweyo nje ngamaZwe aManyeneyo, iidolophu ezilikomkhulu lezizwe ezimanyeneyo zidla ngokungabi zezona dolophu zinkulu okanye zidla ngokungabi zodolophu zinenyambalala yabantu. Umzekelo, iAlbany likomkhulu leNew York, ingasiyo New York City.
Kukho into engaqhelekanga eCanada; ikomkhulu lezizwe ezimanyeneyo, iOttawa, akuyodolophu inkulu kwiphondo layo. I-Ontario, ekuyiToronto. Kodwa kwenzekile okokuba iToronto ibe likomkhulu lephondo iOntario. ngale ndlela ke, iToronto ilikomkhulu iphinde ingabilokomkhulu, kuxhomekeke kwindlela oyibona ngayo, njengedolophu yesizwe okanye njengenxalenye yeendawo zesizwe.